साउनको शुरुआतसँगै हरियो चुरा र पोतेको बिक्री तीव्र, बजार पूरै हरियाली ! « Khabarhub
साउनको शुरुआतसँगै हरियो चुरा र पोतेको बिक्री तीव्र, बजार पूरै हरियाली !
विराटनगर– प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरको बजार यतिखेर पूरै हरियाली भएको छ ।
साउनको आगमनसँगै विराटनगरको बजार होस् वा भित्री गल्लीका दोकानहरुमा यतिखेर महिला दिदीबहिनीलाई हरियो चुरा, हरियो पोते, पेलो पोते, मेहन्दी, हरियो साडीहरु खरीद गर्न भ्याइनभ्याइ भएको छ ।
यस्तै विराटनगर निवासी ५० वर्षीया सलिना कोइराला हिन्दू महिलाले साउन महीनालाई विशेष महीनाका रुपमा लिने गरेको र साउन महीनामा हरियो चुरा, हरियो पोते, मेहन्दी र हरियो वस्त्र लगाई शिवजीको पूजा गर्ने सोमबारको व्रत बस्ने श्रीमानको लामो आयु तथा दीर्घायुको कामना गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १ : ३८ बजे